हाम्रो बारेमा - शेन्जेन Yurucheng दन्त सामग्री कं, लि
YUCERA एक बलियो पेशेवर प्राविधिक टीम छ, यसको सदस्यहरु को 60% वरिष्ठ पेशेवर जैविक विशेषज्ञहरु र बुद्धिमान सीएनसी विशेषज्ञहरु छन्। साथै, YUCERA धेरै प्रसिद्ध चिनियाँ संस्थानहरु संग घर र विदेश बाट उन्नत उत्पादन टेक्नोलोजी पेश गर्न सहयोग।
Yurucheng धेरै ठूलो डेन्चर प्रशोधन केन्द्र र मौखिक अस्पतालहरु संग सहयोग स्थापित, क्षेत्र मा उत्कृष्ट प्रदर्शन प्राप्त र राम्रो प्रतिष्ठा रकम प्राविधिक र बिरामीहरु कमाउन।
हाम्रो मुख्य उत्पादनहरु सिरेमिक डेन्चर zirconia ब्लक, सीएडी/सीएएम उपकरण, 3D मुद्रण उपकरण र अन्य सम्बन्धित दन्त उत्पादनहरु छन्। पेशेवर मौखिक सामाग्री आपूर्तिकर्ता को रूप मा, हामी डिजिटल दन्त सामग्री, दन्त उपकरण, र डिजिटल उत्पादनहरु र सेवाहरु को पूर्ण दायरा प्रदान गर्न सक्छौं।
ग्लोबल बजार को विकास, हामी दन्त सामग्री डिजिटल दन्त सामग्री को एक उत्कृष्ट ब्रान्ड मा विकास गर्न प्रतिबद्ध छौं।
हाम्रो विकास अथक खोज र निरन्तर नवाचार बाट उत्पन्न भएको हो।
1. Yucera धेरै ठूलो डेन्चर प्रशोधन केन्द्र र मौखिक अस्पतालहरु संग सहयोग स्थापित, क्षेत्र मा उत्कृष्ट प्रदर्शन प्राप्त र राम्रो प्रतिष्ठा रकम प्राविधिक र बिरामीहरु कमाउन।
2. हामी पहिले नै सीई र आईएसओ प्रमाणीकरण पारित गरेका छौं।
कुनै पनि टिप्पणी स्वागत छ।
प्रशिक्षण सबै सदस्यहरु को लागी एक मुख्य पाठ्यक्रम हो र हामी हाम्रो क्षमताहरु लाई सुधार गर्न र हामीलाई जीवन को सौन्दर्य खोज्न को लागी मद्दत गर्न को लागी विभिन्न प्रशिक्षण संगठित गर्नेछौं। हामी समय को खजाना हामी सिक्न र सँगै अध्ययन गरीरहेका छौं।